Mali: Tuareg lagu laayay weerrar 'aargoosi ah’ oo ay jihaadiyiin soo qaadeen - BBC News Somali
Image caption Dadka Tuareg taariikhiyan waa reer guuraa dadka Berber ah oo ku nool dalka Mali iyo wadammada dariska la ah
In ka badan 40 xubnood oo ka mid ah bulshada Tuareg ayaa waxaa lagu dilay laba weerrar oo kala duwan oo waqooyi bari ee waddanka Mali ay ku soo qaadeen maleeshiyaad looga shakisan yahay inay Jihaadiyiin yihiin, sidaa waxaa sheegay mas'uuliyiinta waddankaasi.
Weerrarada ayaa Khamiistii iyo Jimcihii ka dhacay gobolka shishe ee Menaka.
Waxaa la rumaysan yahay in weerraradan ay ahaayeen aargoosi ah oo yimid kaddib markii ciidammada Tuareg ay todobaadyadii la soo dhaafay ay weerrareen saldhigyo ay leeyihiin jihaadiyiinta.
Inta badan deegaannada waqooyi bari ee dalka Mali ayuusan sharciga ka shaqeyn walow 2015 la gaaray heshiis nabadeed oo u dhaxeeyay dowladda iyo fallaagada Tuareg, iyo weliba iyadoo ay halkaas joogaan ciidamo caalami ah.
Dadka Tuareg taariikhiyan waa reer guuraa dadka Berber ah ayaa 2012 waxa ay qabsadeen qeyba badan oo ka mid ah gobolka oo ay ka mid tahay magaalada taariikhiga ah ee Timbuktu.
Hasayeeshee deegaankaasi ayaa markii dambe waxaa la wareegay dagaalyahanno gacansaar la leh urur weynaha Al-Qaacidah, ilaa markii dambe halkaasi looga saaray howgal uu horkacayay Faransiiska oo aaggaasi laga fuliyay 2013.
Mali ayaa tan 1960-kii markii ay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska waxaa soo maray afar kacdoon oo kala duwan.
Tuareg iyo kooxaha Carabta eek u nool waqooyi bari ayaa sheegay in gobollada koonfurta ee qaniga ah ay iska hilmaameen.